လူတို့ အားကောင်းသောစကားကိုပြောပါလေ (၂း၈၃)
တမန်တော်မြတ် (ဆွ) မိမိတို့အားပြောပြခဲ့သည့် အလွန်အရေးပါသော ဆုံးမစကားတစ်ရပ်သည် မည်သူ့ကိုမဆို နိမ့်ကျသောစကား မိုက်ရိုင်းသော စကားမပြောရန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ နိမ့်ကျသော စကားကိုပြောဆိုသည့်အခါ ကြားသူ၊ အပြောခံရသူသည် အလွန်ပင် စိတ်မချမ်းသာမှုကို ခံစားရ ပါသည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းသည် ပြောသူကိုလည်း အားနည်းမှု စိတ်ပျက်မှုကို ဖြစ်စေပါသည်။
လူတိုင်းသည် နှလုံးနှင့် ဦးနှောက်ပါသူများ ဖြစ်သည့်အလျှောက် တွေးတောဆင်ခြင်တတ်သူဖြစ်သည်။ မကောင်းသည့်စကား၊ ဆဲဆိုသည့်စကား၊ ရိုင်းဆိုင်းသည့်စကား၊ မသင့်လျှော်စကားတို့သည် လူ့နှလုံး တွင် မခံနိုင်ဖြစ်လာကာ ရွံ့မုန်းခြင်းကို ပေါ်ပေါက်စေတတ်ပါသည်။ ဦးနှောက်သည်လည်း ထိုရွံ့မုန်းမှုကို တမဟုတ်ခြင်းတုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ပြောဆိုလာသူအား ရန်လိုမှု တိုက်ခိုက်မှု မကောင်းသည့် တုံ့ပြန်မှုကိုပြုလုပ်ခြင်သည့် အပြုအမူကိုဖြစ်ပေါ်စေလာပါသည်။
ယနေ့ခေတ်လူတို့သည် လူတစ်ဦး တစ်ယောက်အကြောင်း မကောင်းပြောစရာရှိလျှင် အလွန်လျှင်မြန်တတ်ကြသည်။ အမှားအယွင်း တစ်ခုတွေ့လျှင် မမြေးမမြန်း မစုံမစမ်းဘဲ ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုသည် ပြင်းထန်ကြသလို စောလွန်းလှ လေသည်။ ကမ်းကုန်လောက်အောင် ပြစ်တင်ကြလေသည်။ မန်မာန ထောင်လွှားမူ၏ အဆုံးအဆင့် တွင် သေတွင်ရောက်အောင်ပို့ကလည်း လက်မနှေးကြသည်ကိုတွေ့ရသည်။ အာဂါတ တရား ကြီးမားကြသည့် လူသားတို့သည် မိမိလုပ်ရပ်ကို မဆင်ခြင်နိုင်ကြတော့ပေ။ သတိတရား လွင့်ပါး ကုန်ကြလေပြီ။
အိုမုမင်န်တို့ အသင်တို့မေ့လျှော့်နေကြပြီလား။ အမိန့်တော်လာရှိသည်မှာ-မု့မင်န်ဟူသည် စင်စစ် ညီရင်းအကိုများသာဖြစ်ပါသည်။ (၄၉း ၁၀) ညီရင်းအကိုတို့အတွင်း ချစ်ခင်မှု့စိတ် ကြင်နာသည့်စိတ် နားလည်ခွင့်လွှတ်သည့်စိတ် ကိုယ်ချင်းစာသည့်စိတ် ထားသင့်သည်မဟုတ် ပါလား၊ ညီအကိုအချင်းချင်း အစဉ် ပဲ့ပင်ဆုံးမ တိုင်ပင်ဆွေးနွေး ကူညီယိုင်းပင်းသည့် စိတ်များ မွေးဖွားဖို့ စိတ်ကူးကြည့်သင့်သည် မဟုတ်ပါလား။ တမန်တော်ဟူဒ် ပြောသည့်စကားကို သတိရစေချင်သည်။ တမန်တော်ဟူဒ် မိန့်သည်မှာ မိမိသည် စင်စစ် ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကြံကောင်းပေးသူသာဖြစ်ပါသည်။ အသင်တို့၏ ကောင်းကျိုးကိုသာ လိုလားသောသူဖြစ်ပါ သည်။ (၇း၆၈) ထိုသို့ဆိုလျှင် မိမိတို့သည် ယနေ့မိမိတို့ညီအကို မွတ်စ်လင်များကို မည်သို့ ဆက်ဆံသင့်သည်ကို သဘောပေါက်လိမ့်မည်ဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ် (ဆွ) သည် မည်သည့်အခါမဆို ယုတ်ဆွအဆုံး သေဆုံးသွားသည့်သူတို့ကိုပင် ကောင်းသည့်အကြောင်း ကောင်းသည့်စကားကိုသာ ပြောနေသင့်ကြောင်း သက်သေများစွာဖြင့်ပြသခဲ့ သည်။ ဥပမာ။ အိုင်အိရှာသခင်မ တင်ပြသည်မှာ မိမိသည် မည်သည့်အခါမျှ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) ၏ ဇနီးတော်များနှင့် ပတ်သက်လာလျှင် မနာလိုခြင်းသည် မည်သည့်အခါမျှ မဖြစ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ခဒီဂျာ သခင်မနှင့် ပတ်သက်လာလျှင်ဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်သည် မည်သည့်အခါမဆို သိုး၊ ဆိတ်များ လှီးဖြတ်လျှင် ခဒီဂျာ သခင်မ၏ မိတ်ဆွေများကို ပို့သလေ့ရှိသည်။ ထိုအခါ မိမိက အိုတမန်တော် အသင်သည် ခဒီဂျာသခင်မနှင့်ပတ်သက်လျှင် အလွန်ဂရုစိုက်လေ့ရှိသည်။ သဘောက ခဒီဂျာ သခင်မမှလွဲလျှင် ကမ္ဘာပေါ်အခြားမိန်းမ မရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်ဟုပြောသည့်အခါ၊ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က အိုအိုင်အိရှာ ခဒီဂျာသခင်မသည် အလွန်ကောင်းပါသည်။ (ခဒီဂျာသခင်မ အကြောင်း အကောင်းချည်းပြောနေပြီးမှ) ငါ၏သားသမီးများကို သူမနှင့်သာ ပေါင်းသင်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ တမန်တော်မြတ်သည် ခဒီဂျာသခင်မ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများကို တွေ့လျှင် အထူးစိတ်လှုပ်ရှားလောက် အောင်ဖြစ်လေ့ရှိပြီး ဂရုတစိုက်ဆက်ဆံလေ့ရှိပါသည်။ [Al-Bukhari and Muslim].
လူတို့၏ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သဘောကို ကြည့်လျှင် ကောင်းသောစကားသည် ပြောသူကို စိတ်ရွှင်လန်းစေ ပြီး အားအင်တိုးစေကာ တက်ကြွမှုကို ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုသို့ပြောသူကို အများက အလွန်ကျေးဇူးတင် သည့်အပြင် ချစ်ခင်မှုကို တိုးပွားစေပါသည်။
ကောင်းမွန်သည့်စကားပြောဆိုသည့်အခါ နှလုံးတွင် ချမ်းမြေ့မှုဖြစ်သည့်အလျှောက် ဦးနှောက်ကလည်း မွန်ရည်သည့် တုံ့ပြန်မှုကို ဖြစ်စေသဖြင့် ပြောသူနှင့် ကြားသူအကြား ချစ်ခင်မှုဖြစ်ပေါ်လာစေပြီး ပြောသူအတွက် ဂုဏ်မြင့်စေခြင်းဟူသော အခြေအနေကို ဖြစ်ပေါ်စေပါသည်။ ထို့ကြောင့် မိတ်ဆွေ၊ လူဆိုသည်မှာ နိမ့်ကျမှု ဂုဏ်ငယ်မှုကို မည်သည့်အခါမျှ မနှစ်သက်တတ်သည့်အတွက် ကောင်းသော စကားကိုပြောရင်း ဂုဏ်ဆောင်သူဖြစ်အောင် မွန်မြတ်မြင့်မြတ်သူဖြစ်အောင် ပြုလုပ်သင့်ပါသည်။
အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည် မိမိကိုယ်၌ ကောင်းခြင်းဂုဏ်ပုဒ်ဖြင့် ပြည့်သူဖြစ်သည်။ အရှင်မြတ်သည် မည်သည့်အခါတွင် မဆို ကောင်းသောစကားကိုယ်သာ ပြောလေ့ရှိသည်ကို တွေ့ရမည်။ မည်သည့် အခါမျှလည်း အခြားသူများကို မကောင်းသည့်စကား၊ ထိခိုက်နစ်နာစေမည့်စကား၊ အန္တရာယ်ဖြစ်စေ မည့်စကားပြောခြင်း အလျှဉ်းမပြုပါ၊ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် ပြောခဲ့သည့် စကားများဖြစ်သည်။ မိမိတို့လူသားတို့အနေဖြင့် မည်သည့်အခါ အလ္လာဟ်ထံပါးမှ မကောင်းသည့် စကားကို ကြားခဲ့ခြင်းရှိပါသလား။ ထို့ကြောင့် သေချာသည်မှာ ကောင်းသော စကားသည် အစဉ် ကောင်းသည့်အဆင့်အတန်းဂုဏ်ကို ဖြစ်စေသဖြင့် မိမိတို့အနေဖြင့် ကောင်းသောစကားဖြင့် မိမိကိုယ်ကို တန်ဆာ ဆင်ရန် လိုအပ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါသည်။
တမန်တော်မြတ် မိန့်သည်မှာ သာသနာဟူသည် သစ္စာရှိခြင်းပင်ဖြစ်သည် ။ သာဝကကြီးတို့က ၄င်းသစ္စာရှိခြင်းသည် မည်သူ့အတွက်ဖြစ်ရမည်နည်း။ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) က အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် အတွက်၊ အရှင်မြတ် ၏ တမန်တော်အတွက်၊ အရှင်မြတ်၏ ကျမ်းမြတ်အတွက်၊ မွတ်စ်လင်တို့၏ ခေါင်း ဆောင်များအတွက် နှင့် မွတ်စ်လင်မ်ထုအတွက်ဖြစ်သည်။ Tamim bin Aus Ad-Dari (May Allah be pleased with him) reported:
အလ္လာဟ်အတွက် သစ္စာထားခြင်းသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်အား နှစ်နှစ်ကာကာ ယုံကြည်ခြင်း၊ ကိုးကွယ်မှုပြုခြင်း၊ အမိန့်တော်များကို သေချာစွာ လိုက်နာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျမ်းမြတ်ကုရ်အာန်ကို သစ္စာထားခြင်းသည် နေ့စဉ် ကျမ်းမြတ်ကို ဖတ်ခြင်း၊ အမိန့်တော်ရှိသည့်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက် ခြင်းဖြစ်သည်။ တမန်တော်မြတ်အား သစ္စာထားခြင်းသည် တမန်တော်မြတ်၏ အမိန့် အမှာစကား တို့ကို စနစ်တကျ လေ့လာလိုက်နာခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မွတ်စ်လင်မ် ခေါင်းဆောင်များကို လိုက်နာခြင်း ဟူသည် ၄င်းတို့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့၏ အမိန့်များသည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်များနှင့် မဆန့်ကျင်သ၍ အသင်တို့သည် သူတို့၏ အမိန့်ကို နာခံရမည်ဖြစ်သည်။ မွတ်စ်လင်မ်ထုနှင့် အပေါ်သစ္စာထားခြင်းသည် ၄င်းတို့ကို အေးအတူပူအမျှ စုဝေး ကာ ပူးပေါင်းနေထိုင်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်မှန်ကန်သည့် စကားပြောကာ လမ်းမှန်သို့ခေါ်ဆောင်ပြီး မကောင်းမှုများမှ တားမြစ်ခြင်း၊ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ပင်ဖြစ်ပါသည်။
အနက်စ် (ရ) တင်ပြသည်မှာ တမန်တော်မြတ် (ဆွ) မိန့်သည်မှာ အသင်တို့သည် မိမိညီအကို မုမင်န်များအတွက် မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာကို ကြိုက်နှစ်သက်မှသာလျှင် စစ်မှန်သော အီမာန်ရှင်ဖြစ်မည်။ သဘောမှ မိမိမနှစ်သက်သည့်အရာကို အခြားသူများအတွက်လည်း မလုပ်ခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ မိမိတို့သည် အများအားဖြင့် မိမိတို့ မနှစ်သက်သည့် အရာဆိုလျှင် သူများအတွက် ပေးခြင်း ပို့ခြင်း လုပ်လေ့ရှိသည့်အတွက်ဖြစ်သည်။[Al-Bukhari and Muslim].
Abdullah bin `Umar တမန်တော်မြတ် (ဆွ) မိန့်သည်မှာ အကောင်းဆုံးသော လုပ်ရပ်ဟူသည် မိမိဖခင်၏ မိတ်ဆွေများကို ကောင်းစွာဆက်ဆံခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ တစ်ရက် အဗ်ဒွလ္လာဗင်အိုမာရ် သည် အာရဗ် ကျေးတောသားတစ်ဦးကို မိမိအစီးအနင်း၏ နောက်ဝယ် ထိုင်စေကာ အတူလာရာ လူတစ်ဦးက မေး သည်မှာ အသင်သည် ဤ ကျေးတောသားကို အဘယ်ကြောင့် ဂရုစိုက်ရသနည်း။ ထိုအခါ အိဗ်နိအုမာရ်က ဤလူ၏ ဖခင်သည် အိုမာရ်၏ မိတ်ဆွေဖြစ်သည်။ အုမာရ်သည် သူ့ကို အလွန်ချစ်ခင်သည်။ ထို့နောက် မိမိလည်း တမန်တော်မြတ်မိန့်သည့်အတိုင်း မိမိဖခင်၏ မိတ်ဆွေများကို ချစ်ခင်ခြင်းဖြစ်သည်။ [Muslim].
သဘောမှာ မိမိတို့သည် ဖခင်၏ မိတ်ဆွေနှင့် သူ၏ အသိုင်းအ၀ိုင်းကို သိသည်နှင့် ဆက်လက်ချစ်ခင်မှုကို ထိန်းသိမ်းရမည်။ သူတို့ကိုချစ်ခင်စွာ ကူညီစောင့်ရှောက်သင့်သည်ကို ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ရန် လမ်းညွှန်ခြင်းဖြစ်သည်။
တမန်တော်မြတ်မိန့်သည်မှာ မိမိဘများသေဆုံးသော်လည်း သူတို့ကို ဆက်လက်ရိုကြိုးခြင်း၊ ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံခြင်းသည် သူတို့၏ အသက်ရှင်လျှက်ကျန်ရှိသော မိတ်ဆွေများကို ကောင်းစွာ ဆက်ဆံခြင်းပင်ဖြစ် သည်။ Abu Usaid Malik bin Rabi`ah As-Sa`idi[Abu Dawud]. တနည်းအားဖြင့် မိဘများသေဆုံးလျှင် ၄င်းတို့အတွက် မိမိဖတ်ရွတ်သမျှ ဝေငှခြင်း အလ္လာဟ်ထံပါးမှ သူတို့အတွက် ခွင့်လွှတ်မှုကိုတောင်းခံခြင်း၊ သူတို့၏ မိတ်ဆွေများကို ကောင်းစွာဆက်ဆံခြင်းဖြင့် သူတို့သည်လည်း ၀မ်းမြောက်မူကို ရရှိမည်ကို ဆိုလိုရင်း ဖြစ်သည်။ ဤနေရာတွင် သတိပြုရမည့်အချက်သည် လူသည် သေဆုံးသည်နှင့် သူ၏ အလုပ်များ အကျိုးဆွဝါဗ် များသည် ရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်သည်။ သူဆက်လက်ရနိုင်မည့် ဆွဝါဗ်သည် သူသက်ရှိဘ၀တွင် ဆောက်လုပ်ခဲ့ သည့် စဉ်ဆက်ရမည့်ဆွဝါဗ်များဖြစ်သည်။ ဥပမာ၊ ဗလီဆောက်ခဲ့ခြင်း၊ ကျောင်းဆောက်ခဲ့ခြင်း၊ မွတ်လင်မ်ထု အတွက် ဘာသာရေးပညာများ သင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြင့် သူတို့သည် ဆက်လက် ဆွဝါဗ် လုပ်နေသမျှ သေဆုံးသူတို့လည်း ဆက်လက်ရနေမည်ဖြစ်သည်။ သို့ဖြစ်၍ သေဆုံးသော်လည်း ဆွဝါဗ် ဆက်လက်ရနေမည့် အလုပ်များတွင် ကောင်းရာညွှန်ကြားခြင်း သင်ပေးခြင်းသည် အသေချာဆုံး ဆွဒ်ကာဂျာရိယာ အလုပ်ဖြစ်သည်။